रोचक / बिचित्र – DhankutaKhabar
Category: रोचक / बिचित्र
तीनजनाले जन्माए एक बच्चा, मानव जीवनमा नयाँ आयाम
काठमाडौं, ५ माघ । तीन जनाको जैविक मिश्रणबाट एक बच्चाको जन्म भएको छ । अहिलेसम्म दुई विपरीत लिंगीबाटमात्र बच्चा जन्माउने गरेको ईतिहासलाई चुनौती दिँदै तीन जनाले बच्चा जन्माएका हुन् । … Read More... यी मर्दका छन्ः ८ सय बच्चा, हरेक हप्ता बन्छन् नयाँ बच्चाको बाउ !
तपाइँलाई अचम्म लाग्यो होइन ? कुनै पुरुष के ८ सय जना बच्चाको बाउ बन्न सक्छ ? अझ हरेक हप्ता एउटा नयाँ बच्चाको बाउ बन्ने हैसियत कुन मर्दले राख्ला ? आमपुरुषको … Read More... जब पेटमा अड्किएको बियरको बोतलको बिर्को निकाल्न कण्डमको प्रयोग गरियो
काठमाडौं, २७ पुस । पेटमा अड्किएको बियरको बोचलको बिर्को निकाल्न कण्डमको प्रयोग गरियो भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर यो कुरा साँचो हो । चीनमा एक व्यक्तिले रक्सी खाँदा रक्सीसँगै … Read More... विद्यालय गएका छात्राहरु अचानक बेहोस हुदै ढल्दै
बेहोस भएका जाजरकोटको वागेश्वरी मावि पजारुमा अध्ययनरत छात्राहरु । छात्राहरु एकाएक बेहोस हुन थालेपछि विद्यालयमा पढाई प्रभावित भएको छ । तस्बिर: हेमन्त के सी, रासस, जाजरकोट Read More... ओमपुरीले गौतम बुद्धको जन्म भूमी नेपालमा देह त्याग गर्न चाहेको खुलासा
एजेन्सी । ओम पुरीकी जनसम्पर्क अधिकारी स्मिता सिंहले ओम पुरी बारे नयाँ खुलासा गरेकी छिन् । उनका अनुसार ओम पुरीले मृत्युको एक हप्ता पहिलेदेखि नेपालमा आएर आफ्नो देह त्याग्ने बारे … Read More... प्रेम गर्नेहरुका लागि जनवरी ९ किन खतरनाक हुन्छ ?
के प्रेममा धोका पाउने पनि कुनै तिथिमिति हुन्छ ? पहिले त यस्तो कहिल्यै सुनिएको थिएन त । तर हालै भएको एक अनुसन्धानले प्रेम गर्नेहरुका लागि जनवरी ९ को दिन निकै … Read More... श्रीमतीले सेक्स गर्न नमानेपछि श्रीमानले काटे आफ्नै लिङ्ग
काठमाडौं, २५ पुस । भारतको उत्तरप्रदेशमा एक पुरुषले आफ्नै लिंग काटेका छन् । श्रीमतीले सेक्स गर्न नमानेको भन्दै ३७ वर्षका घासी रामले आफ्नै लिंग काटेका हुन् । घासी रामले श्रीमतिले … Read More... Posts navigation